Wasaaradaha internetka - Calaamadaha kale ee wacdiyeyaasha
Tan iyo qarnigii kowaad oo dhan kaniisadaha Masiixa waa kuwo madaxbannaan, mana haysanno xafiis dhexe ama guddi maamul oo ka sarreeya dhammaan kaniisadaha Masiixa. Ciise Masiix waa madaxa kaliya ee kaniisadda.
Boggaga internetka ee soo socda waxaa ka mid ah mawduucyada khudbadda halka qaarkood ay lahaan doonaan sheeko iyo fiidiyoowyo fiidiyoow ah oo laga heli karo internetka. Xidhiidhada soo socda ayaa loogu talagalay dhammaan dadka Masiixiyiinta ah ujeedada wacdinta iyo cilmi baarista. Qaar ka mid ah boggaan internetka ayaa sidoo kale laga yaabaa inay ku jiraan isku xirnaanta kheyraadka cilmaaniga ah ee aan ku xirnayn kaniisadaha Masiixa. Liiska hoos ku qoran maahan mid ka soo horjeeda maaddooyinka caqiidada.
Kaniisadda Concord Road ee Masiixa
Church Long Island Church of Christ
Jason Church of Christ * Jason Clayton
Mt. Kaniisadda Juliet ee Masiixa
Kaniisada Waqooyiga Boulevard * David Young (Audio)
Wadiiqooyinkii hore ee erayada
Kaniisada Pasir Panjang ee Christ * Henry Kong
Waqti ku qaadashada Jim McGuiggan (Audio iyo Video)
Kaniisada Kaniisadda ee Taylorsville * Jerry Parks (Audio)
Kaniisadda Christ of Twenty Sixth * Alan C. Cole
Church of Twickenham ee Christ * Huntsville, Alabama (Audio)